I-acne ebusweni bomntwana osanda kuzalwa
Ngokufika komntwana osanda kuzalwa emndenini kunezizathu eziningi zokukhathazeka. Phakathi kwabo, ukubunjwa kwegesi kanye nokubonakala kwe-colic, ukuvuselelwa kokudla, izibhamu nokucasula esikhumbeni somntwana. Ungesabi ukubonakaliswa okunjalo, udinga nje ukwazi ukuthi ungenzani kulokhu noma kuleso simo, indlela yokuqeda imbangela yokungahambi kahle kwengane. Lesi sihloko sizoxoxa ngale nkinga kubantwana abasha, njengezintambo ebusweni.
Izinga lama-hormone, uhlobo lwazo luyakuthinta ngokuqondile isimo sesikhumba somntwana futhi kungabangela ukubukeka kwe-acne esikhumbeni. Ngokuvamile, i-acne iqala phakathi kwamasonto amathathu okuqala ngemva kokuzalwa. Lesi sikhathi sibonakala nge-curl ye-hormonal. Kwavezwa ukuthi i-acne ingabonakala ngisho nokuthuthukiswa kwe-intrauterine kwengane. Isizathu salokhu yisamba esiningi ngokweqile.
Ungesabi, zonke izingane ezisanda kuzalwa zithola inkinga ye-hormonal. Kuvela eqinisweni lokuthi omama emzimbeni wakhe bangamahomoni wesifazane. Lokhu kungenxa yokuvuvukala kwezigulane ezincelisayo emntwaneni, kanye nokuphuma kwamanzi okuphuma emaseni kumantombazane. Izinga lokubonakaliswa kwezinkinga ze-hormonal ngumuntu ngamunye kwengane ngayinye - umuntu ubonakalisa ngokucacile, futhi omunye ukhululekile futhi cishe awubonakali.
Ukuthuthukiswa kwamafutha kanye nemikhumbi yabo
Ngokuvamile ebusweni bezingane ezisanda kuzalwa zikhona ama-comedones avaliwe omhlaba. Lezi zakhiwo zifana nokuhamba kwamaparele amancane. Izinsalela ezinjalo akufanele ziphazamise abazali, ngoba azimeli ingozi. Ngemva kwesikhashana badlula ngaphandle kokulandelela futhi abadingi ukungenelela kwezokwelapha.
Kukholelwa ukuthi ama-comedones avaliwe avela ezigulini ezingakaze zakhuthuka zezingqungquthela ezisabekayo. Uma ukubunjwa kwabo kuphela, ama-comedones ayanyamalala. Ngesikhathi esilandelayo bayaphazanyisa ingane kuphela ngesikhathi sokukhulelwa.
Kukholelwa ukuthi lokhu kungenye yezimbangela ezivame kakhulu zokuthuthukiswa kwezinyoni. Ebusweni bokujuluka kuyinto engavamile kakhulu, ikakhulukazi ama-pimples asendaweni yesikhumba esikhwameni, ehlanganisa izindawo ze-axillary, izindawo ezisezingxenyeni, intamo, u-ulnar namajoyini emadolo. Ekujuleni okungahoxisiwe kubonakala ngemuva, isisu ngisho nasesimweni. Ezimweni ezikhethekile, i-acne ingadala.
Ngokuphathelene nalokhu, isikhombi kufanele sivinjelwe. Akudingekile ukuba ugqoke ingane ishisa kakhulu, hhayi ngesimo sezulu. I-acne iqala uma ijezela ngamandla - ngakho-ke igama elithi "ukukhukhumeza." Uma umisa ukuthuthukiswa kwenkukhu, ungabonisana nodokotela wezingane, uzobeka ukwelashwa okufanele.
Ngokuvamile ebusweni bomntwana avele induna ngemva kokuhamba emgwaqweni ngesikhathi sasebusika sonyaka. Kukholelwa ukuthi le-acne ayiyona into kodwa ukujwayela kwesikhumba endaweni yokushisa ephansi. Okusho ukuthi kancane kancane isikhumba siyavumelana nezinguquko ekushiseni kwomoya - indlu efudumele nomuntu obandayo emgwaqeni. Ungakhathazeki ngama-pimples anjalo, azozimela ngokuzimela ngezinsuku ezimbalwa.
Kodwa-ke, ukuvimbela ukubonakala kwe-acne entsha, zama ukuvikela isikhumba somntwana ngekhilimu evikelayo eyenzelwe isikhumba esibucayi sezingane. Uma ukhilimu ovikelayo ungasiza, kubalulekile ukugwema ukuhamba efrijini okwesikhashana.
Ngesinye isikhathi i-acne emntwaneni iwumphumela wokungabekezelelani okweqile kubisi lwebele noma yiziphi izingxenye zefomula. Esimweni esinjalo, ngokushesha ususe i-allergen yomsoco womntwana. Uma ingane isela ubisi lwebele, umama kufanele akhiphe ekudleni kwakhe konke ukudla okubheka ukuthi kungase kube yilapho ingane ingabhekwa khona. Uma uthola ubisi lwe-milk ingenzi, kunconywa ukuthi ushintshe ingxube. Kunconywa ukuyeka ukukhetha kwakho kokuhlanganiswa kwe-hypoallergenic.
Kungcono ukuthi ungazitholi ngokwakho, ngaphandle kwalokho kungabangela isimo esibucayi. Kunconywa ukufuna usizo kudokotela wezingane noma i-allergenist. Uzokwazi ukukhetha ukudla okwanele nomama, ukuncelisa kanye nomntwana, uzokweluleka ingxube efanele yokufakelwa.
Kumele kuqashelwe ukuthi uma umntwana enesibonakaliso sokudla komzimba, kungenzeka ukuthi unesimo esivamile sokwelashwa. Le-nuance kufanele ikhunjulwe ngaso sonke isikhathi futhi ungaphuthelwa isimo sempilo yengane yakho ezilwaneni.
Ukwelashwa kwemisipha, i-acne
Yiqiniso, bonke abazali bashesha ukuphatha induna emzimbeni wengane yabo. Kodwa khumbula ukuthi imithi ayikwazi ukusetshenziselwa yodwa, ingabekwa kuphela udokotela. Lokhu kubalulekile, ngoba izidakamizwa ezikhethiwe ezingalungile zingenza ngcono isimo futhi ziholele nasekubukeni kwezibazi esikhunjeni sethenda yengane.
Njengoba kukhulunywe ngenhla, ezimweni eziningi, ama-acne ayadingeki kunoma yikuphi ukwelashwa. Kodwa kunezimiso eziningana ezizosiza ukugwema ukubukeka kwe-acne noma ukuyeka ukuthuthukiswa kwazo.
Okokuqala, hlela ukudla komama ongumhlengikazi. Umama okhulelwa kufanele ashiye ngokuphelele amafutha, okubabayo, ukudla okuthosiwe, kanye nemikhiqizo equkethe izidakamizwa, imibala yokufakelwa. Akunconywa ukuba udle imifino nezithelo ngezinga eliphakeme lokugqwala okubomvu, ikhofi, iziphuzo ze-carbonated, amaswidi kanye nobisi lonke. Le pomozheti yokudla ingane encane futhi kusukela ekubonakalweni kokuphendula okweqile futhi kusuka ekwakheni ukwakhiwa kwegesi.
Okwesibili, yenza amabhati okugeza. Uma i-acne isendaweni yendawo yama-foldillary noma ama-inguinal amafolda, ingane kufanele ivunyelwe ukuchitha isikhathi esiningi ngaphandle kwezingubo. Lezi yizinto ezibizwa ngokuthi izibhuku zomoya, eziwusizo kakhulu ekujuleni futhi ngesikhathi sokushaywa kwe-diaper. Khumbula ukuthi ungabamba amabhuku okuhamba emoyeni ekamelweni lokushisa kusuka emazingeni angu-22 nangaphezulu, ukuze umntwana angabikho.
Okwesithathu, ungakhohlwa ukugcina iso lokuhlanzeka komuntu siqu: ngokuhamba kwesikhathi, ugeze i-crochet, qiniseka ukuthi usula izikhumba zesikhumba ngaphakathi, sula ubuso ngoboya bekotini, ngaphambili obanjwe emanzini abilisiwe. Inqubo yokugcina ingama-5-6 izikhathi ngosuku.
Futhi owokugcina - yiba nesineke! Ama-acne azohamba ngokushesha futhi ngaphandle kokulandelela, uma ulandela imithetho ehlanzekile echazwe ngenhla.
Inyanga yesine yentuthuko yengane
Ukuncelisa emva kwesisu
Ngingakanani engingayidinga ukuze ngiluse?
Indlela yokuncelisa ingane kahle?
Inyanga yesihlanu yokuphila kwengane
Ukuhambisana kwabantu ngezibonakaliso ze-zodiac
Izinkukhu ze-chicken nge-corn
Ungayigcina kanjani intsha isikhumba?
Ungayifundisa kanjani umuntu ukukunika injabulo?
Isicelo sobumba ku-cosmetology nemithi
Fortune ukukhuluma ngoKhisimusi Eve: izindlela zokukhuluma ngenhlanhla, ukuqagela
Ukungathembisani phakathi kwendoda nowesifazane
Isaladi nge-shrimps nama-croutons
Umhlangano womzali: kanjani ukuthatha ingane
Sandwichs esishisayo yase-Italy
Isitayela sesiGreki: ingaphakathi
Ukuhamba emoyeni ngesikhathi sokukhulelwa
Pie ne inkukhu kanye anyanisi
I-Canape nge-neckray neck
Ukudla okuvela kuT hope Babkina
Izakhiwo eziwusizo ze-cumin ne-fennel